सबै आउटडोर LED प्रदर्शनहरू समान बनाइने छैनन्। यति धेरै विकल्पहरू र सुविधाहरू उपलब्ध छन्, सबैभन्दा उपयुक्त छनौट गर्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। केहि एलईडी डिस्प्ले हाइलाइट क्वालिटी लेवलहरू निर्माण गर्दछ, जबकि अन्यले सब भन्दा राम्रो मूल्यको आउटडोर एलईडी डिस्प्ले प्रदान गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ।
तपाईं कुनको लागि जान चाहनुहुन्छ?
न्यूनतम मूल्य एलईडी डिस्प्ले?
उत्पादकहरू जुन उनीहरूलाई मूल्य मार्फत मार्केट गर्छन् केवल सामान्यतया कम्पनीहरूबाट टाढा रहन्छन्। यस प्रकारका कम्पनीहरू आउँछन् र चाँडै जान्छन्। सस्तो उत्पादन भएका उत्पादकहरूले सामान्यतया धेरै कुनाहरू काट्छन् जब यो आउँछ एलईडी डिस्प्लेका लागि प्रयोग हुने आन्तरिक घटकको प्रकारमा। यसले कम गुणवत्ता सस्तो उत्पादनहरुतर्फ अग्रसर गर्दछ। कम गुणस्तरको कम्पनीहरूले कभर गर्नको लागि फ्यान्सी मार्केटिंग सर्तहरू प्रयोग गर्दछन् र उनीहरूको उत्पादनहरू बेच्नका लागि।
सामान्यतया सस्तो मूल्य प्रस्तावको साथ एक LED प्रदर्शन निर्माता:
तल्लो तहको चमक केवल ,000००० NITS
मेसेजि software सफ्टवेयर प्रयोग गर्न गाह्रो - समर्थन र बोझिलको अभाव
पार्ट्स र समर्थनमा लामो नेतृत्व लिन्छ
गुणस्तर प्रमाणन को अभाव - UL सूचीबद्ध छैन, CUL सूचीबद्ध वा सीई सूचीबद्ध
नराम्रो वारेन्टी - न्यूनतम २ बर्ष भागको वारंटी
पिक्सेल सेयरिंग वा वर्चुअल रेजोलुसन - सफ्टवेयर जसले नेतृत्व प्रदर्शन डिस्प्ले छविहरू लामो पार्ने दाबी गर्छ तर लामो अवधिमा छवि स्पष्टता र एलईडी मोड्युलहरूको जीवनको साथ धेरै समस्याहरू सिर्जना गर्दछ।
एक उच्च गुणवत्ता एलईडी प्रदर्शन के हो?
तपाईंको उत्पादनहरूको बारेमा इमानदार र अग्रसर भएर तपाईंको व्यवसाय सँधै बढ्नेछ र ग्राहकहरूले तपाईंको गुणवत्तालाई विश्वास गर्नेछन्।
जब एक क्वालिटी एलईडी डिस्प्ले र निर्माताको खोजी गर्दा उनीहरूको नेतृत्वमा प्रदर्शनहरू हुन् कि भनेर जाँच्न सँधै जाँच गर्नुहोस्।
तापमान र मौसम परीक्षण गरीएको छ - इकाइहरू माइनस -२२ डिग्री देखि rated२ डिग्री तापमानको लागि मूल्या rated्कन गरिएको भनेको उत्पादकले वास्तवमै औद्योगिक ग्रेडका आन्तरिक कम्पोनेन्टहरू प्रयोग गर्दैछ। यो वातावरणको सबैभन्दा harshest मा भरपर्दो प्रदर्शन को बर्ष बराबर हो।
सख्त परीक्षण पास गर्दछ - एलईडी डिस्प्ले जहाज अघि उनीहरूको लागि परीक्षण गरिनु पर्छ र निम्न परीक्षणलाई पास गर्नु पर्छ: सिग्नल अखण्डता, कोल्ड स्टार्ट, रेडिएटेड उत्सर्जन, औष्णिक, प्रभाव, ज्वाला, वर्षा, प्रतिरक्षा, र शल्य संरक्षण परीक्षणहरू।
समर्थन सामग्रीहरू र नि: शुल्क प्रशिक्षण - प्रिरेर्डर्ड सफ्टवेयर प्रशिक्षण भिडियोहरूको लाइब्रेरी र नि: शुल्क प्रत्यक्ष सफ्टवेयर प्रशिक्षण।
आईएसओ 1 ००१: २०० Cer प्रमाणित कम्पनी ठोस कम्पनीको महान् चिन्ह हो। यस प्रकारको प्रमाणीकरण गुणको बराबर हो।
वारेन्टी - न्यूनतम २ बर्षे वारेन्टी कुनै कम्पनी जसले वारेन्टी आफैंमा काम गर्दछ र तेस्रो पार्टी बीमा कम्पनी प्रयोग गर्दैन यसको मतलब निर्माताले उनीहरूले उत्पादित उत्पादनहरूको गुणस्तरमा विश्वास गर्दछन्।